Knowledge Archives » Papawadi
မိမိသုံးစွဲနေတဲ့မြန်မာ ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဝါဇီ စက်ရုံအကြောင်း
မြန်မာ ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဝါဇီ စက်ရုံအကြောင်း
မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူ မြို့ အနောက် တောင်ဘက်ရှိ တန့်ကြည့်တောင်တန်း၏ တောင်ဖက်အစွန်းဆုံး ပေ ၁၀၀၀ ခန့်မြင့်သော တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ စက်ရုံတောင်ဘက်တွင် ယောချောင်း၊ အနောက်ဘက်၊ မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများ၊ အရှေ့ဘက်တွင် လမ်းရွာကျေးရွာ နှင့် ဧရာဝတီမြစ် တို့ တည်ရှိပါသည်။ စက်ရုံ မိုင် ၂၀ ပတ်လည်တွင် မည်သည့် လူနေအိမ်ခြေ အဆောက်အအုံမျှ မရှိပေ။
ဝါဇီစက်ရုံသို့ သွားမည်ဆိုပါက ချောက်မြို့မှ လမ်းရွာ ကျေးရွာသို့ စက်လှေဖြင့်သွားရပါသည်။ ချောက်မြို့အထက် ၁၀ မိုင်ခန့်တွင် ကားသယ်နိုင်သော စက်ရေယာဉ်များ ရှိပါသည်။ စက်ရုံ အဝင်လမ်းသည် လမ်းရွာကျေးရွာနှင့် ဧရာဝတီ မြစ်ကိုဖြတ်လျက် တည်ရှိပါသည်။ စက်ရုံအဝင်လမ်းနှင့် အထွက်လမ်း မှာ တစ်လမ်းတည်းပင် ဖြစ်သည်။
စက်ရုံရှိ အလုပ်သမား၊ ပညာရှင်များမှာ တပ်မတော်မှ ဖြစ်သည်။ အရပ်သားလုံးဝ မရှိပေ။ စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ် သော တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များမှအပ မည်သူမျှ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိပေ။ စက်ရုံသို့ သွားရာလမ်းတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ် ၃ ခုရှိပါသည်။ လမ်းရွာ ကျေးရွာမှ စထွက်သည်နှင့် လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးများ စောင့်ကြပ်နေသော ပထမစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကြီးကို ရောက်ပါသည်။ ၎င်းမှ တောင်တက်လမ်းအတိုင်း ဆက်တက်၍ ၁၅ မိုင်ခန့် မောင်းနှင်ပြီးပါက ဒုတိယစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ရောက်ပါသည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ၁၅ မိုင်ခန့် ဆက်လက် မောင်းနှင်ပြီးပါက တတိယစစ်ဆေးရေးဂိတ် ရောက်ပါသည်။ ထို့နောက် ဝါဇီစက်ရုံသို့ရောက်ရှိပါသည်။ လမ်းရွာ ကျေးရွာမှ စက်ရုံထိ မိုင် ၃၀ ခန့် မောင်းနှင်ရပါသည်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုင်း၌ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားပြီး လက်နက် ကိုင် တပ်သားများထားရှိပါသည်။
စက်ရုံတွင်းရောက်သည် နှင့် ပုံစံတူ အရွယ်တူ လူနေ တိုက်ခန်းများကို တွေ့ရပါမည်။ စက်ရုံလုပ်သားများနှင့် မိသားစု ဝင်များ နေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုမှ အနည်းငယ် ဆက်တက်ပါက ပင်မစက်ရုံသို့ ရောက်ရှိပါမည်။ ပင်မ စက်ရုံထဲသို့ စက်ရုံ အလုပ်သမားများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ သာ သွားလာခွင့်ရှိပါသည်။
စက်ရုံမှ ပြည်တွင်းသုံး ငွေစက္ကူ များ၊ စာပို့ စာချုပ် တံဆိပ်ခေါင်းများ၊ အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ်များနှင့် လုံခြုံရေး နှင့်ဆိုင်သော စာရွက်စာတန်းမျိုးစုံကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။
ငွေစက္ကူ များကို ဝါဂွမ်းချည် ၄၀ % နှင့် လုံခြုံရေးကြိုး ပါသော စက္ကူသားများဖြင့်ရိုက်နှိပ်ရပါသည်။ ရေနီစက္ကူစက်ရုံမှ ထွက်သော ရိုရိုးစက္ကူများဖြင့် ရိုက်နှိပ်၍ မရသည်က တစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း၌လည်း မထုတ်လုပ်နိုင်သဖြင့် ဝါးဂွမ်း ချည် ၄၀ % နှင့် လုံခြုံရေးကြိုးပါသော စက္ကူ သားများကို အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှတင်သွင်းရပါသည်။
အစိုးရအဆက်ဆက်သည် ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေစက္ကူ ရိုက်နှိပ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီဟု တင်ပြလာပါက စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် စက်ရုံသို့ အဆင့်ဆင့် အကြောင်းကြားပြီးမှ စက်ရုံ က ရိုက်နှိပ်ရပါသည်။ စက်ရုံမှ ရိုက်နှိပ်လိုက်သော ငွေစက္ကူ များသည် သုံးစွဲ ၍ မရသေးပါ။ နံပါတ်စဉ် မတပ်ရသေး၍ ဖြစ်သည်။
စက်ရုံမှ ရိုက်နှိပ်ပြီးစီးသော ငွေစက္ကူများကို အစောင့် အကြပ် အပြည့်အစုံနှင့် နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ ပို့ဆောင် ရပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေစက္ကူ များကို နံပါတ်စဉ်ရိုက်နှိပ်ပါသည်။ ဝါဇီစက်ရုံ၌ ရိုက်နှိပ်၍မရပါ။ ဗဟိုဘဏ်မှ ထိုငွေ စက္ကူ များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လစာပေးရာတွင်သုံးပါသည်။( စာဖတ်သူတို့သတိထား ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ ရလာသည့် ငွေစက္ကူသည် အသစ်ချပ်ချွတ်၊နံပါတ်အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေတတ်သည်။) ထိုသို့ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီး သောအခါ မြန်မာပြည်တွင်း၌ သုံးစွဲနေသော ငွေကြေးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပေ သည်။
Credit – မူရင်းရေးသားသူ
မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း လုံးဝလုံး၀ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေပါ.. လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်.
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလှုပ််ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မနက်ခင်း အိပ်ရာနိုးနိုးခြင်းနဲ့ စတင်ပါတယ်။
မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ််နေရင်းက လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲ နစ်နာရတာပါ။
ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ ဒါတွေကို မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်။
အိပ်ရာနိုးပြီဆိုတာနဲ့ တစ်မှေးလောက်ပြန်မှေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ဦးနှောက်က အိပ်စက်မှုစက်ဝန်းကို ပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နိုးလာရင်လည်း မူးနောက်နောက်ကြီး ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ လူကိုနိုုးကြားစေတဲ့ ကော်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုး အလိုလိုထွက်ရှိနေပြီးသားပါ။
ကဖင်းဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကော်တီဇောဟော်မုန်းထွက်ရှိမှု အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။
အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် ကော်တီဇောဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိမှု နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာကို ချက်ချင်းဖွင့်ပြီး အီးမေးလ်စစ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဖေ့စ်ဘွတ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ကတော့ မနက်ခင်းမှာ ဘာဝတ်ရမလဲဆိုတဲ့ အရေးမကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် အချိန်မပေးချင်လို့ ပုံစံတူ အရောင်တူဝတ်စုံပေါင်း ၂၀ ကို ထားရှိပြီး အသင့်ဝတ်ဆင်ပါသတဲ့။
ကိုယ်ကတော့ ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ညကတည်းက ဝတ်စုံကိုကြိုထုတ်ထားရုံပေါ့။
၅။ အမှောင်ထဲမှာ ဆက်နေခြင်း
အလင်းအမှောင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
မှောင်လာရင် အိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိ ဝင်နေပြီး လင်းနေရင်နိုးနေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိပ်ရာနိုးပြီဆို အမှောင်ထဲမှာ ဆက်ပြီးမနေပါနဲ့တော့။
၆။ အိပ်ရာထဲမှာ ဆက်ပြီးလဲလျောင်းခြင်း
အိပ်ရာက နိုးပြီးဖြစ်လင့်ကစား ဆက်ပြီးလဲလျောင်းနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မနက်စာမစားခင်လေး လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းလောက်လုပ်လိုက်တာ ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။
မနက်စာမစားမီ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက အခြားအချိန်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာထက် အဆီတွေကို ပိုပြီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်လို့ပါပဲ။
၇။ လုပ်သင့်တာတွေကို ချက်ချင်းမလုပ်ဘဲနေခြင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင် အချိန်ဖြုန်းမနေဘဲ ချက်ချင်းထလုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ယခုတိုင် အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသေးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးနင်ဂျာ
သူကတော့ အသက် ၆၃ နှစ် အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ Jinichi Kawakami ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့ မီးခိုးဗုံး တွေကြားမှာကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီးသွားလာနေတဲ့ လျို့ဝှက်လူသတ်သမား အလုပ်နဲ့ဟာဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးနင်ဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ တကယ့်အစစ်အမှန်နင်ဂျာတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူဟာ ဘန်ဂိုဏ်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ။ဘန်ဂိုဏ်းဆိုတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀၀ လောက်ကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ နင်ဂျာဂိုဏ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Jinichi ဟာ ယနေကထက်တိုင်အသက်ရှင်နေတဲ့ ဂျပန်ရဲ့စပိုင်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။သူဟာ အသက် ၆ နှစ်အရွယ်မှာ နင်ဂျာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဆရာကတော့ ဘုန်းတော်ကြီး Masazo Ishida ပဲဖြစ်ပြီးတော့ Jinichi ဟာ ဒီနင်ဂျာသိုင်းတွေကို လေ့ကျင့်မိမှန်းမသိလေ့ကျင့်နေခဲ့မိတာပါ။
အချိန်အတော်ကြာတဲ့အခါမှ သူလေ့ကျင့်နေတာတွေဟာ Ninjustu သိုင်းတွေဖြစ်နေကြောင်းသတိထားမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ကြမ်းပေါ်အပ်ကျတာတောင်သိနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြိး နံရံတွေပေါ်လည်း ပြေးတက်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုရောစပ်ကာမီးခိုးဗုံးလုပ်တတ်ပြီးတော့ အပူအအေးနာကျင်မှု ဒါတွေကို ခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ ဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီး လျို့ဝှက်စာလိပ်ကိုပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
နင်ဂျာသိုင်းတွေကတော့ ရန်သူတွေကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပဲ ရန်သူမသိအောင် လျို့ဝှက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မယ့် နည်းစနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တကယ်နင်ဂျာစစ်စစ်တွေမရှိတော့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုလည်းဘယ်နင်ဂျာမှ ဆက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Crd Daily Hot News
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ ဂျွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်း ရုရှားဖလားပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေစဉ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ငါးလိပ်ကျောက်ပုံစံအလင်းရောင်တန်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲဟာ ကမ္ဘာကို ကျော်ပြီးတော့ အာကာသထဲအထိ ပျံ့နှံ့တဲ့အတွက် ဂြိုလ်သားတွေတောင်လာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်လို့ မီဒီယာတွေက ဖော်ပြထားကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆိုရင် ” ဘာကြီးပါလိမ့် ။ အရင်က ဒါမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး” ဆိုပြီး တအံ့တသြနဲ့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
အလင်းတန်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြတဲ့လူအများစုကတော့ ဒါကို ဂြိုလ်သားတွေလို့ပဲ အခိုင်အမာမှတ်ယူထားကြပါတယ်။
ရုရှား အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနချုပ်ကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒါဟာ အာတိတ်ဘက်မှလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ ဂြိုလ်တုဒုံးပျံယာဉ် Soyuz-2.1B မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းတန်းက ယိုင်ပြီးတော့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဖြေရှင်းထားပါတယ်။
Glonass-M ဂြိုလ်တု တင်ဆင်ထားတဲ့ Soyuz-2.1B ဒုံးပျံယာဉ်ကိုတော့ ဂျွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မော်စကိုစံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီ ၄၆ မိနစ်မှာ လွှတ်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ဒီဂြိုလ်တုဟာ ဂြိုလ်တုပတ်လမ်းထဲကို ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိသွားပြီလို့ အာဏာပိုင်တွေကကြေငြာထားပါတယ်။
ဒီအလင်းရောင်ကို ဂြိုလ်တုဒုံးပျံယာဉ်မှထွကပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာကြေငြာထားခဲ့သော်လည်း ဂြိုလ်သားတွေလို့ယူထားပြီး ဂြိုလ်သားတွေကျူးကျော်မှုရန်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ရှရှားပြည်သူတွေရှိနေကြောင်း မီဒီယာတွေသတင်းအရသိရပါတယ်။
Source : mmcrime
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအပြီး ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဘာလုပ်ကြသလဲ
၂၅ ငါးနှစ်​အတွင်​းအကြီးဆုံးမုန်​တိုင်​း ဂျပန်​မှာဝင်​သွားတယ်​ ။
ဂျပန်​မှာ အလုပ်​လုပ်​​နေတဲ့ bro kaung satt hein မျက်​မြင်​​တွေ့ခဲ့ရတာ​လေး ထပ်​ဆင်​့ Share ချင်​ပါတယ်​ ။
မုန်တိုင်းရှိတယ်ဆိုလို့ အလုပ်လဲမသွားရ ဘယ်မှလဲ မထွက်ဖြစ်ဘူး အိမ်မှာပဲ နေနေရင်းနဲ့ပဲ နေ့လည် ၁ – နာရီလောက်ရောက်တော့ မိုးစရွာပါလေရော အဲ့လိုနဲ့ အတော်လေးကြာတော့ မုန်တိုင်းစနေတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တွေလဲ မကြုံဖူးတော့ ဝရံတာဘက်လေးထွက်ကြည့်မိပြီး Live တောင်လွှင့်လိုက်မိသေးတယ် (ရွာသား)ခဏနေတော့ အပြင်ဘက်မှာ ရှော့ခ်တွေဖြစ် ဓာတ်ကြိုးတွေပြတ်နဲ့ အိမ်မှာလဲ မီးတွေပျက်ပါလေရော !!! ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ ဘာလုပ်မှာလဲ အိပ်နေတာပေါ့ အထဲပြန်ဝင်ပြီး !! အဲ့လိုနဲ့ ၅ – နာရီ လောက်ကျတော့ တစ်ယောက်က ဟျောင့်တွေ အပြင်မှာ သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်နေကြတယ်တဲ့ !!! အဲ့မှာ ကိုယ်ထင်လိုက်တယ် ဪ.. သူတို့ဆီက စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်တော့တစ်ကယ်လုပ်ကြသားပဲပေါ့ !!!! ခဏနေတော့ ဝရံတာဘက် ထွက်ကြည့်လိုက်တယ် .. လားလားး အထင်နဲ့အမြင် တက်တက်စင်ပဲဗျို့ … !! ကိုယ်ထင်တာက စည်ပင်လိုမျိုး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု က သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေကြတယ်ပေါ့ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးနားအိမ်က လူတွေ(ဂျပန်တွေ) သူတို့နေတဲ့ လမ်း သူတို့နေတဲ့ အိမ် သူတို့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (ကိုယ်တွေ အခုနေနေတဲ့ အိမ်ရှေ့ပါမကျန်) ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေကြတယ်ဗျာ!!! ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်နေနိုင်ပါတော့မလဲ (လူ .. ဗျ လူ .. လူ ) အပြင်ထွက်ပြီး ဝိုင်းဝန်းကူညီရတော့တာပေါ့ (သူတို့က လာပြီးကူညီလှည့်ပါမပြောဘူးနော်) အဲ့မှာကို ကိုယ်တွေ ထပ်တွေးလိုက်မိသေးတယ် သူတို့ကို ဘယ်သူကများ ခိုင်းတာလဲပေါ့ ?? ကျွန်တော်ထပ်မှားတယ်ဗျ !!! သူတို့ကို ….
မုန်တိုင်းပြီးတာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါလို့ ခိုင်းထားတာမရှိဘူးဗျ!! သူတို့ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကို သူတို့လုပ်ကြတာ !!!! ကလေး က အစ လူကြီးအဆုံးနော် !!! ကလေးတွေကို အန္တရာယ်ရှိတယ် အိမ်ထဲဝင်နေလို့ပြောတာတောင် တံမြက်စည်းနဲ့ ဂေါ်ပြားကိုင်ပြီးထွက်လာတယ်ဗျာ ကလေး က (ကိုယ်နားလည်လိုက်သလောက်လေး)အဲ့မှာ မဆီမဆိုင် ကိုယ့်နိုင်ငံ အကြောင်းကို တွေးမိပြန်တယ် ငါတို့ဆီမှာသာဆိုရင် …..ဆိုပြီးး!!!! ( ကြက်သီးတွေတောင်ထတယ်ဗျာ… )
စည်ပင်လာလုပ်လိမ့်မယ် !! နောက်နေ့အထိ စည်ပင်ဦးဦးတို့ မအားလို့ လာမလုပ်သေးဘူးမလား (ဘာလုပ်မလဲ??) အပြစ်တွေတင်ပြီး ကြည့်နေကြမှာပဲ (လာမရှင်းမချင်း)…!!! မိုးကြီးလို့ ရေများများစီးကြည့်ပါလား အိမ်မှာရှိတဲ့ အမှိုက်တောင် ထွက်မျှောချလိုက်ကြသေးတယ် ရေစီးကြောင်းအတိုင်း !!! ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်ရှေ့ ကွက်ကွက်လေးကို ရှင်းလင်းတာလောက်တော့ထည့်မရေးတော့ဘူးး(ထားပါတော့!!) ၂ အဲ့မှာ သူတို့ကတော့ ဒီတစ်နေရာပြီးရင် နောက်နေရာတွေ ဆက်ရှင်းဖို့ပြောပြီး လုပ်ကြရင်း !!! ကိုယ်တွေတစ်သိုက်ကလည်း ငါတို့ဆီမှာသာ ဒလိုဖြစ်ရင်ဆိုပြီး လေကြီးလေကျယ်တွေ ပြောပြီးယောင်ကြရင်းး !!! …. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဆက်မှားနေရင်းးးး ………!!!!
ဘယ်အချိန် ထပြီးများ စင်ကာပူ ထက် သာသွားမလဲ ဆိုတာစောင့်ရင်းးးးး !!!
မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍( ၇ )ဖြင့်စားပါ။
အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများနှင့် အကျိုးပေး အား နည်းတတ်သည်။
တစ်နေရာတည်း၌ အခြေချရန် ခက်ခဲတတ်သည်။
အိမ်၌ စွဲမြဲစွာနေလျှင်လည်း ကျန်းမာရေး
တော်ရုံတန်ရုံ လူချမ်းသာများပင်လျှင် မနေနိုင်သော အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနှင့် နေထိုင်ရတတ်သည်။
ခမ်းနားထည်ဝါသော အိမ်ကြီးများ၌ နေထိုင်ရတတ်သည်။
ယခုအခြေအနေ၌ ဆင်းရဲနေလျှင်ပင် အိမ်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားတက် ချမ်းသာလာနိုင်ပေသည်။
အိမ်ကိုအကြောင်းပြု၍ စီးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်သောကြောင့်အိမ်နှင့်အလုပ်ကို တွဲထားသင့်ပေသည်။
ရုတ်တရက်အမွေရခြင်း ထီပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားတက်၍လည်းကောင်း ဆုရခြင်း
မဲပေါက်ခြင်း လက်ဆောင်ရခြင်း ကြီးကဲသူတို့က ချီးမြှင့်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
ပူပင်များရခြင်းများကြုံရတတ်ပေသည်။ အိမ်နှင့်အလုပ်ကို တွဲ၍မထားသင့်သော ဇာတာရှင်များဖြစ်သည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသော ပုံစံဒီဇိုင်းရှိသည့်အိမ်များ၌ နေထိုင်ရမည်။
ဤသူများနေထိုင်ရာအိမ်တွင် အများစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ထူးထူးခြားခြား ရှိနေတတ်သည်။
မိမိမှာ အိမ်ပိုင်ပါလျက်နှင့် သူတစ်ပါး၏အိမ်တွင်
မကြာခဏ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန် ဇာတာပါလာသူများဖြစ်သည်။
ဆရာ ဇင်ယော်နီ ၏ ” ရွှေအိမ်တော် အဖွင့်ကျမ်း ” မှ
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍( ၇ )ျဖင့္စားပါ။
အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားနွင့္ အက်ိဳးေပး အား နည္းတတ္သည္။
တစ္ေနရာတည္း၌ အေျခခ်ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။
အိမ္၌ စြဲျမဲစြာေနလ်ွင္လည္း က်န္းမာေရး
ေတာ္ရံုတန္ရံု လူခ်မ္းသာမ်ားပင္လွ်င္ မေနနိုင္ေသာ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းနွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။
ခမ္းနားထည္ဝါေသာ အိမ္ၾကီးမ်ား၌ ေနထိုင္ရတတ္သည္။
ယခုအေျခအေန၌ ဆင္းရဲေနလ်ွင္ပင္ အိမ္ကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္စီးပြားတက္ ခ်မ္းသာလာနိုင္ေပသည္။
အိမ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားျဖစ္ထြန္းတတ္ေသာေၾကာင့္အိမ္နွင့္အလုပ္ကို တြဲထားသင့္ေပသည္။
ရုတ္တရက္အေမြရျခင္း ထီေပါက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားတက္၍လည္းေကာင္း ဆုရျခင္း
မဲေပါက္ျခင္း လက္ေဆာင္ရျခင္း ၾကီးကဲသူတို႔က ခ်ီးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း
ပူပင္မ်ားရျခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္ေပသည္။ အိမ္နွင့္အလုပ္ကို တြဲ၍မထားသင့္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။
ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ပံုစံဒီဇိုင္းရွိသည့္အိမ္မ်ား၌ ေနထိုင္ရမည္။
ဤသူမ်ားေနထိုင္ရာအိမ္တြင္ အမ်ားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ထူးထူးျခားျခား ရွိေနတတ္သည္။
မိမိမွာ အိမ္ပိုင္ပါလ်က္နွင့္ သူတစ္ပါး၏အိမ္တြင္
မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္ ဇာတာပါလာသူမ်ားျဖစ္သည္။
ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ ၏ ” ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း ” မွ
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား…
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။
ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ
သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု
ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. ကု = ပြေးကုန်သတည်း။
ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အကြံအစည် ပျက်သောအားဖြင့် …. ဝေ = ပျောက်စေကုန်သတည်း။
ဒါ = ငါ၏ ဒါန စေတနာတို့ကြောင့် …. ယသာ=အခြံအရံ အကျော်အမော်တို့သည် …. တ = ပွါးများ စေကုန်သတည်း။
တသာ=ငါပြုမိသော အကုသိုလ် ၁၀ပါးတို့သည် …. ယ = ငါပြုမိသော ကုသိုလ် ၁၀ပါး၏ တန်ခိုးတော်တို့ကြောင့်
သာ = စက်ဆုပ်ဖွယ်သောသူတို့အားလည်းကောင်း … သာ = အမျက်မာန ဒေါသရှိသော သူတို့အားလည်းကောင်း …. ဓိ = ဆုံးမသြဝါဒ ပေးခြင်းဖြင့်သာလျှင် ….ကု = အောင်မြင်စေသတည်း။
ကု = ထိုထိုသော အမျက်မာန မာန်တက်သူတို့နှင့် ….ဓိ = ရှည်မြင့်စွာ …. သာ =မပေါင်းဖော်ရသည် …. သာ = ဖြစ်ပါစေသတည်း။
ကု = ကုသိုလ်စရိုက် ပြုကျင့်လေ့ရှိသော …. တ = သူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလျှင် ….ကု = ဖြစ်လေရာ သံသရာ ဘဝအဆက်ဆက်၌ ….ဘု = တွေ့ဆုံပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေသတည်း။
ဘု = အကုသိုလ် ဒုစရိုက် ပွါးများသူတို့နှင့် …. ကု = ဖြစ်လေရာ သံသရာ ဘဝအဆက်ဆက်၌ ….တ = အခါ ခပ်သိမ်း ….ကု = တွေ့ဆုံပေါင်းဖော်ခြင်း မပြုရသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းးး။
အခကျအခဲတှနေဲ့ အရမျး ကွုံနရေရငျဒီဂါထာလေး ရှတျကွညျ့ပါလား…
တဈနေ့ ၇ ခေါကျ ပုံမှနျရှတျရုံနဲ့ ထူးခွားပါလိမျမယျ။
ဝဒေါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ
ဝေ = ငါ၏ရနျသူ ဟူသမြှတို့သညျ …. ဒါ = ဝေးစှာသော အရပျသို့ …. သာ = လငြျစှာ …. ကု = ပွေးကုနျသတညျး။
ကု = ငါ့အား မကောငျးသဖွငျ့ ကွံကုနျသောသူတို့သညျ …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အကွံအစညျ ပကြျသောအားဖွငျ့ …. ဝေ = ပြောကျစကေုနျသတညျး။
ဒါ = ငါ၏ ဒါန စတေနာတို့ကွောငျ့ …. ယသာ=အခွံအရံ အကြောျအမောျတို့သညျ …. တ = ပှါးမြား စကေုနျသတညျး။
တသာ=ငါပွုမိသော အကုသိုလျ ၁၀ပါးတို့သညျ …. ယ = ငါပွုမိသော ကုသိုလျ ၁၀ပါး၏ တနျခိုးတောျတို့ကွောငျ့
သာ = စကျဆုပျဖှယျသောသူတို့အားလညျးကောငျး … သာ = အမကြျမာန ဒေါသရှိသော သူတို့အားလညျးကောငျး …. ဓိ = ဆုံးမသွဝါဒ ပေးခွငျးဖွငျ့သာလြှငျ ….ကု = အောငျမွငျစသေတညျး။
ကု = ထိုထိုသော အမကြျမာန မာနျတကျသူတို့နှငျ့ ….ဓိ = ရှညျမွငျ့စှာ …. သာ =မပေါငျးဖောျရသညျ …. သာ = ဖွဈပါစသေတညျး။
ကု = ကုသိုလျစရိုကျ ပွုကငြျ့လေ့ရှိသော …. တ = သူတောျကောငျးတို့နှငျ့သာလြှငျ ….ကု = ဖွဈလရော သံသရာ ဘဝအဆကျဆကျ၌ ….ဘု = တှေ့ဆုံပေါငျးဖောျခွငျးကိုပွုရစသေတညျး။
ဘု = အကုသိုလျ ဒုစရိုကျ ပှါးမြားသူတို့နှငျ့ …. ကု = ဖွဈလရော သံသရာ ဘဝအဆကျဆကျ၌ ….တ = အခါ ခပျသိမျး ….ကု = တှေ့ဆုံပေါငျးဖောျခွငျး မပွုရသညျဖွဈပါစသေတညျး။
သင့် အိမ်ဟာ မည်သည့်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေပါစေ..အသက်ရှည် အနာမဲ့စေဖို့ ဒီအချက်တွေ အတိုင်း အိပ်စက်ပါ..
ရှေးကလူကြီး များသည် မိမိတို့ နေရမည့်အိမ် ဆောက်လုပ် ရာတွင် မည်သည့် အရပ်ကို မျက်နှာပြု ရသည်ဖြစ်စေ ဘုရားစင် ထားရှိရမည့် အရပ်၊ အိပ်လျှင် ဦးခေါင်းပြု ရမည့်အရပ် မျက်နှာတို့ကို ရွေးချယ်လေ့ ရှိကြသည်။ ဖြစ်သလို အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ နေထိုင် အိပ်စက်ခြင်း မရှိကြပေ။ ရှေးလူကြီး များ၏ အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဓလေ့ကောင်း များကို လေ့လာ ဖော်ထုတ် လိုက်နာခြင်း အားဖြင့် အကျိုး ယုတ်စရာ အကြောင်း မရှိပေ။ သိပ္ပံနည်း မကျဟု ဆိုကြသူများ ရှိသော်လည်း သိပ္ပံပညာ ထွန်းကား လာသည်နှင့် လူ့သက်တမ်း များ တိုလာ သည်မှာလည်း စဉ်းစားစရာ အချက် ဖြစ်ပေသည်။ ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နှင့် စျေးသုံးလည်း မလွယ်နှင့် ဟူသော စကားသည် အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။
ရှေးကလူကြီး များသည် အိပ်ရာဝင် ချိန်တွင် ဦးခေါင်းချရာ အရပ်ကို (၁)အရှေ့အရပ်၊ (၂) တောင်အရပ် တို့ကို ဦးခေါင်းပြု၍ အိပ်စက်ရမည်။ ထိုသို့ ဦးခေါင်းပြု အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းစွာ အိပ်ပျော် စေသည်။ ကောင်းသော အိပ်မက်ကို မြင်မက်စေသည်။ အိပ်ပျော် နေချိန်တွင် အစာကြေခြင်း ကို ဖြစ်စေသည်။ မလိုအပ်သော အပုပ်၊ လေ၊ ဝမ်း တို့သည် ညင်သာစွာဖြင့် အောက်သို့ သက်စေသည်။ စမြင်းဒေါသမှ ကင်းစေသဖြင့် အနာ ရောဂါလည်း ကင်းစေသည်။ နံနက် အိပ်ရာထ ချိန်တွင်လည်း ကောင်းစွာနိုးထ စေနိုင်သည် ဟု ယူဆကြသည်။
(၃) မြောက်အရပ်၊ (၄) အနောက်အရပ် တို့သို့ ဦးခေါင်းပြု၍ မအိပ် ကောင်းပေ။ ထိုသို့ ခေါင်းပြု အိပ်သူများသည် ကောင်းစွာ အိပ်စက် မပျော်နိုင်။ လေပွခြင်း၊ ဟောက်ခြင်း၊ အသက်ရှူ မဝခြင်း၊ လန့်၍နိုးခြင်း၊ ကောင်းသော လေ၊ အပုပ်တို့ အထက်သို့ ဆန်ခြင်း၊ မျက်စိ ပွင့်လျက် အိပ်ခြင်း၊ လျှာကိုက် မိခြင်း၊ နှုတ်နှင့် ခံတွင်းမှ အာပုပ်ရည် တို့ စီးကျခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်း ပြောခြင်း၊ အိပ်မက်မက် ရာတွင် အမြင့်မှ ချောက်ကမ်းပါး မှ ပြုတ်ကျသည်ဟု မက်ခြင်း စသော အပြစ်များစွာ ရှိသည့်အပြင် ညဦးက စားထားသော အစာများ မှာလည်း မကြေမကျက် သဖြင့် ဝမ်းတွင်း စမြင်းခံခြင်း၊ ဒူလာ လိပ်ခေါင်း ရောဂါဖြစ်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓ ဖြစ်တော်စဉ် ကျမ်းစာများ တွင်လည်း ဘုရားရှင်၏ လဲလျောင်း နေသော ရုပ်ပွားတော်များ ထုလုပ် ကိုးကွယ် သောအခါ သတိပြုရမည့် စာညွှန်းမှာ ထို ရုပ်ပွားတော်၏ ဦးခေါင်းတော် ထားရှိရာကို ရည်ညွှန်းလျက် (၁) အရှေ့ ရွှေသာလျောင်း၊ (၂) တောင် ပေါင်းလောင်း၊ (၃) မြောက် စောင်းကုဿိနာ ဟု ဆိုသဖြင့် အရှေ့အရပ် သို့ ဦးခေါင်းထားလျှင် ရွှေသာလျောင်း ဆင်းတုတော်၊ တောင်အရပ် သို့ ဘုရား ဦးခေါင်းပြု ထားလျှင် ပေါင်းလောင်းတော်၊ မြောက်အရပ်သို့ ခေါင်းပြု ထားလျှင် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသည့် ကုဿိနာရုံမှ ဆင်းတုတော် ပုံတူဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရှင် ကြီးတစ်ဦးက ဟောပြော ရာတွင်လည်း သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများသည် မြောက်အရပ် သို့ ဦးခေါင်းပြု၍ မအိပ်ရ။ သွေးတိုးတက်၍ ညအိပ်ရာ ထဲတွင် လေဖြတ် နေစေနိုင် သည်ကို သတိပြုဟု ဟောပြော သည်ကို မှတ်သားရဖူး ပါသည်။
နေ့စဉ်ပြု နေကျ နေ၊ ထိုင်၊ စား၊ အိပ် အမှားများကြောင့် လူတို့ အသက်တိုခြင်း ကို ဖြစ်စေသဖြင့် သာမန် အသေးအဖွဲ ဟု မမှတ်ယူ ကြဘဲ မိမိကိုယ်မိမိ အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း စောင့်ရှောက် ကြစေရန် နည်းမှန် လမ်းမှန် ဖြစ်စေရန် တင်ပြ လိုက်ရပေသည်။
မျှစ်ကို ကြိုက်လို့သာစားနေတယ်…ဒါလောက်အလွန်ထူးခြားတဲ့ စွမ်းပကားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ခုမှ သိတော့တယ်….ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်
မျှစ်ကို ကြိုက်​လို့သာစား​နေတယ်​…ဒါ​လောက်​အလွန်ထူးခြားတဲ့ စွမ်​းပကား​တွေရှိ​နေတယ်​ဆိုတာ ခုမှ သိ​တော့တယ်​….ဖတ်​ဖြစ်​​အောင်​ ဖတ်​ကြည်​့လိုက်​​နော်​
မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့် သွားကြပါတယ်။
ခြင်းမျှစ်ဟာ အစာအိမ်ရဲ့ အစာချေဖျက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ မျှစ်ဟာ အစာအိမ် ဝေဒနာကို သက်သာစေပြီး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါကိုလည်း သက်သာစေပါ တယ်။
(၂) နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျစေခြင်း
မျှစ်မှာ ဖီနောလစ်အက်စစ် များစွာ ပါဝင်မှုကြောင့် ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျပြီး အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အစွမ်း ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှလုံးရောဂါ အပါအဝင် နာတာရှည် ရောဂါတွေ ကို လျော့ ကျစေပါတယ်။ မျှစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဟာလည်း နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
မျှစ်မှာ ဖိုင်ကိုကမ်မီကယ် များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ဖန်းဂတ်စ်မှိုတား အာနိသင်၊ ဘက်တီးရီးယား ဆန့်ကျင်တဲ့ အာနိသင်နဲ့ ကင်ဆာတား အာနိသင်တို့ ရှိကြပါတယ်။
မျှစ်မှာ ပိုက်တက်စီယမ် ပါဝင်မှု များတာကြောင့် သွေးတိုးကို ကျစေပါတယ်။ မျှစ်တစ်ခွက်မှာ တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ပိုတက်စီယမ် ပမာဏရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ ပါဝင်နေပါတယ်။
ရိုးရာ ဆေးနည်းအနေနဲ့ မျှစ်ကို သည်းခြေအိတ် ဝေဒနာတွေ လျော့ကျဖို့အတွက် အိမ်သုံးဆေးတစ်လက် အနေနဲ့ အရင်က အသိပြုခဲ့ကြပါတယ်။
မျှစ်ရည်ဟာ ဒဏ်ရာငယ်တွေကို သန့်စင်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ မျှစ်ရည်က ဒဏ်ရာအပေါ် လိမ်းပေးရင် အနာကျက် မြန်စေတယ်လို့ တချို့က ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းက သွေးထွက်နေရင် ဂနိုဆီးပူညောင်းကျရောဂါ ဖြစ်နေလျှင် မျှစ်ကို စားပေးပါက သက်သာစေတယ်လို့ တချို့က ဆိုပါတယ်။